Dhageyso:Xisbiyada Mucaaradka oo Shir deg-deg ah ka yeelanaya Xaalada Somaliland (Maxa cusub)? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dhageyso:Xisbiyada Mucaaradka oo Shir deg-deg ah ka yeelanaya Xaalada Somaliland (Maxa cusub)?
Dhageyso:Xisbiyada Mucaaradka oo Shir deg-deg ah ka yeelanaya Xaalada Somaliland (Maxa cusub)?
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID, Eng. Feysal Cali Waraabe,
Hargeysa (Halqaran.com) – Eng. Feysal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID oo warbaahinta la hadlay ayaa iclaamiyay kulan muhiim ah oo ay yeelan doonaan xisbiyada mucaaradka ee Somaliland.
Mar uu ka hadlayay xaaladda Somaliland ayuu sheegay Feysal Cali Waraabe in Somaliland ay mareyso marxalad aan laga fileyn in Somaliland ay tegi doonto, taasi oo uu sheegay in walwal ay gelisay xisbiyada iyo shacabka reer Somaliland.
Geesta kale, guddoomiyaha Feysal ayaa xusay, in labada xisbi siyaasadeed ee mucaaradka ee ka jira Somaliland in ay kulan deg deg ah yeelan doonaan, kaasi oo dhici doona maalinta berri oo Sabti ah.
Wuxuu intaasi raaciyay, in go’aanno cad ka soo saari doonaan xaaladda Somaliland ay hadda ku jirto.
Halka hoose ka dhageyso codka Eng. Feysal:
Xisbiyada Mucaaradka oo Shir deg-deg ah ka yeelanaya Xaaladda Somaliland